चीनबाट छुट्यो काठमाण्डुका लागि रेल…! | Jukson
चीनबाट छुट्यो काठमाण्डुका लागि रेल…!
एजेन्सी– चीनले नेपालको राजधानी काठमाण्डुलाई केन्द्रीत गर्दै रेलसेवाको सुरुवात गरेको छ । नेपालको राजधानी काठमाण्डु हुँदै दक्षिण एसिया छिर्ने रेलमार्गको सुरुवात भएपछि यो काठमाण्डुका लागि समेत शुभसंकेत हो ।
चीन सरकारले दक्षिण एसियाको ढोकाका रुपमा रहेको सिगात्से शहरबाट नेपालका लागि भन्दै रेलसेवा सुरु गरेपछि यो कदमले नेपाल–चीनबीच ओली सरकारले केही महिना अघि गरेको पारवाहन सम्झौताको समेत कार्यान्वयण हुने संकेत देखिएको छ ।
चीनले लान्ठाउ–सिगात्से–काठमाण्डु यात्रा गर्ने उद्धेश्यका साथ रेल सेवा सुरु गरेको भएतापनि अहिले भने सो रेल सिगात्सेसम्म मात्र आइपुग्ने बताइएको छ ।
चीनको लान्ठाउबाट सो रेल करिब २४ सय कि.मी. पार गरेर तिब्बतको सिगात्सेम्म आइपुग्नेछ भने त्यहाँबाट काठमाण्डुका लागि ल्याइने व्यापारिक वस्तुहरु सडक यातायातबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, तिब्बतकै सिगात्सेबाट गेलुङसम्म करिब ६ सय कि.मी. बाटो सडक यातायातबाट पार गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि नेपालको राजधानी काठमाण्डुसम्म सामान ल्याउन सकिन्छ । चीनले भने यो रेलसेवा काठमाण्डु हुँदै दक्षिण एसिया छिर्ने रणनीतिका साथ अघि बढाएको बताउँदै आएको छ । केही महिनाअघि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका बेला भएको महत्वपूर्ण पारवान सम्झौतापछि चीनले दक्षिण एसिया जोड्ने यो मार्गलाई थप महत्व दिँदै आएको थियो ।
चीनले करिब चार दशकअघि देखिनै काठमाण्डुलाई केन्द्रीत गर्दै रेलमार्ग निर्माण गर्ने द्धिदेशीय बहस चलाउँदै आएपनि यो परिकल्पनाले सार्थक रुप लिन सकेको थिएन । ठूला दुई छिमेकीको बीचमा रहेको नेपालले भने सन्तुलित कुटनीतिक पहल गर्न नसक्दा यस्ता महत्वपूर्ण विकासका कार्यक्रमहरुमा निर्णय समेत गर्न सकेको थिएन ।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सरकारले नेपाल–चीनबीच गरेका महत्वपूर्ण सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन थालेको समेत यो ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपाल–चीनबीच भएका पारवाहन लगायतका सम्झौताहरु भारतका लागि भने टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको छ ।
पानी नपरेपछि भ्यागुताको बिहे : ३०० बढि किसान जन्ती गए
ज्यान गुमाउनेलाई ५० लाख दिने घोषणा गरेको मधेसी मोर्चाले प्रहरीलाई डेरा नदिन उर्दी